မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းထဲ ပိတ်မိနေသူ ၁၅ ဦးကို ကယ်နိုင်
15 มี.ค. 2563 - 12:52 น.
မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ကသဲအုပ်စု၊ ညောင်ပင်ကြီးရပ်၊ အုန်းပင်လူးကျင်းလုပ်ကွက်က မြေအောက်အနက် ပေ ၇၀၀ လောက်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ ကျောက်တွင်းလုပ်သား ၁၅ ဦးကို မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
"ကျောက်တွင်းဟောင်းထဲ ပိတ်မိနေတဲ့ တနိုင်တပိုင် ကျောက်ရှာသူတွေပါ၊ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး တွင်းထဲ ပိတ်မိနေလို့ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာ" လို့ မိုးကုတ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲလောက်မှာ ကျောက်တွင်းထဲ ပိတ်မိနေသူတွေရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကို အကူအညီတောင်းခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတဆင့် မီးသတ်ဌာနကို အကြောင်းကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ချက်မှာတော့ မိုးကုတ်မြို့နယ် လယ်ဦးနယ်မြေမီးသတ်စခန်းက မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၁ စီး၊ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၆ ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မိုးကုတ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေက ပူးပေါင်း ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်ချထားမှုအပေါ်မကျေနပ်လို့ မိုးကုတ်မှာ ဆန္ဒပြ
မိုးကုတ်မှာ ဒေသခံတွေနဲ့ အချင်းများလို့ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီ မီးရှို့ခံရ
မိုးကုတ်မှာ ကျောက်တွင်းလုပ်ကွက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကန့်ကွက်မှုတွေ ရှိနေပြီး ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကလည်း ရာနဲ့ချီတဲ့ ကျောက်မျက်လုပ်သားတွေဟာ သူတို့တွေအတွက် လျာထားတဲ့ ကျောက်တွင်းလုပ်ကွက်သတ်မှတ်နေရာတွေဟာ မျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ မြို့တွင်း ဆန္ဒပြမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ မိုးကုတ်မှာ ကျောက်တွင်းလုပ်ကွက် တရားဝင် ထပ်ချပေးတာ မရှိတော့ပေမယ့် အခုဖြစ်တဲ့နေရာဟာ အရင်လုပ်ကွက်ဟောင်းနေရာမှာ ဖြစ်ပွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တုန်းကလည်း မိုးကုတ်မြို့နယ် မြေမဲကျေးရွာ အနီးက လုပ်ကွက်ဟောင်းတစ်ခုမှာ အခုလိုပဲ ကျောက်လာရှာတဲ့ ကျောက်တွင်းလုပ်သား ၂ ဦးဟာ တွင်းထဲဝင်နေစဉ် အပေါ်က မြေသားတွေ ပြိုကျခဲ့ပြီး တွင်း၀ ပိတ်မိလု အခြေအနေ ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်း မြေပြင်အခြေအနေကို စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ကျောက်တွင်းထပ်ပြိုမယ့် အန္တရာယ်ရှိနေလို့ အဲ့ဒီလုပ်ကွက်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးတွေကို အခုထိ ရပ်နားထားရတယ်လို့ မိုးကုတ်မြို့နယ် အရန်မီးသတ်ဌာန တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းထဲ ပိတ်မိနေသူ ၁၅ ဦးကို ကယ်နိုင်